सयपत्रीमा रमाउँदै थापा दाजुभाइ - कृषि पत्रिका
पवित्रा घिमिरे शनिबार ०१ चैत, २०७६	comments
पाल्पा। व्यावसायिक फूलखेती पाल्पाको रामपुरमा फष्टाउँदै गएको छ । रामपुर नगरपालिका–४ देवीस्थानमा गएको तिहारमा पहिलोपटक सयपत्री फूलबाट मनग्य आम्दानी गरेका दिलबहादुर थापा तथा लालबहादुर थापाले बेमौसमी फूल खेती समेत शुरु गरेका छन् ।
करिब साढे ११ रोपनी जग्गामा कृषि फर्म सञ्चालन गरे पनि करिब दुई रोपनी जग्गामा फूलखेती सञ्चालन गरेका दिलबहादुरले बताए । मागअनुसार पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
सयपत्री फूलका कारण माटोलाई फाइदा हुने र किराले समेत नखाने हुँदा तरकारीभन्दा खेती गर्न गर्न सजिलो हुने उनीहरुको भनाइ छ । करिब १५ सय बिरुवाको उत्पादन बिक्री भइरहेको र अन्य थप ६०० बिरुवा रोपिसकिएको छ । “अब विवाह तथा प्रेमदिवसका अवसरमा गुलाब फूलको समेत माग भएकाले त्यसको खेती गर्ने सोच छ”, दिलबहादुरले भने । गत तिहारमा करिब रु एक लाख ५० हजार फूलबाटै मात्र आम्दानी भएको र यसपालि मेमौसममा रु तीन लाखसम्म आम्दानी हुने आशा दाजुभाइको छ ।
प्रतिमाला रु. १०० र प्रतिकेजी फूलको रु. ४०० मा बिक्री हुँदै आएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले नेपालमै पनि मेहनत गरे प्रतिफल राम्रो हुने विश्वास गरेका छन् ।